मल्लोर्कामा सर्वश्रेष्ठ चेभ्स, जंगली प्रकृति र शान्त समुद्र | Absolut यात्रा
लुइस मार्टिनो | | मलोर्का
मल्लोर्कामा सर्वश्रेष्ठ चेष्टाहरू टापुको अनौंठो समुद्री राहतको परिणाम हो, जुन करोडौं बर्षमा गठन गरिएको छ। केहि क्षेत्रहरू थोप्लाइ प्रस्तुत गर्दछन् चट्टानहरु जुन बाहिर भूमध्यसागरमा जान्छ र विशाल सौन्दर्यको साना तटहरू घेरेर जान्छ। यद्यपि अन्य कम्पसहरू सहरीकृत क्षेत्रमा जस्तै शहरको रूपमा फेला पर्‍यो। पाल्मा बे, टापु को राजधानी।
तर ती सबै साना बालुवा क्षेत्र वा चट्टानी माटो हो जुन ठूलो समुद्र तटको भीडभाडबाट स्वतन्त्र छन् र यसले तपाईंलाई घाममा नहाल्ने र अझ शान्त स्नान गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं पनि तिनीहरूलाई छ लगभग कुमारीहरु, जबकि अरूसँग छ सबै उपकरणहरु आवश्यक संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यदि तपाईं मल्लोर्कामा सबै भन्दा राम्रो चित्रहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई हाम्रो अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 मल्लोर्कामा सर्वश्रेष्ठ कोभ्सको भ्रमण
1.2 Caló डी सा बार्का Trencada
1.3 काला ग्याट
1.4 काला रतजदा
1.5 काला मेस्किडा
1.6 सा Calobra
1.7 कोल Baix, मल्लोर्का मा एक उत्तम coves
1.8 काला फिग्वेरा
1.9 Cala Nandragó
1.10 काला सन्त Vicenç
2 मल्लोर्काको लोभको आनन्द लिनको लागि उत्तम समय के हो?
3 मल्लोर्कामा कसरी उत्तम कोभ्समा पुग्न सकिन्छ
मल्लोर्कामा सर्वश्रेष्ठ कोभ्सको भ्रमण
कुलमा, बेलारिक टापुमा छ लगभग तीन सय लोभ र समुद्री तट, जसले तपाईंलाई सबैभन्दा राम्रो व्यक्तिहरूको छनौटको कठिनाईको कल्पना दिन्छ। यो गर्न, हामी मापदण्डहरू पछ्याउनेछौं जस्तो उनीहरूको सुन्दरता वा सजिलोसँग तपाईं तिनीहरूलाई पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
नगरपालिकामा अवस्थित सान्ताñí, जो मल्लोर्काको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित छ, को लागि पनि चिनिन्छ काला पेटिता। यो दुई समुद्र तटहरू मध्ये एउटा हो जुन उही नामको शहरमा छ, जहाँ टापुमा पहिलो पर्यटक विकास निर्माण गरिएको थियो।
यो ठीक सुनौलो बालुवाको सानो कोभ हो जुन काला डी ओरको एउटै शहरमा छ। र यो दुई अन्य समुद्र तटहरू द्वारा पूरक छ जुन हामी तपाईंलाई भ्रमण गर्न सल्लाह दिन्छौं: काला फेरेरा र ठूलो लोभ। उनीबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ किल्ला, अर्को सुन्दर बलुई क्षेत्रको खुट्टामा अवस्थित गढी, Cala Egos.
तर सबै भन्दा माथि, Cala d'Or मा तपाईंले असंख्य पदयात्रा सडकहरू पाउनुहुनेछ जुन पसलहरू, बारहरू र रेस्टुरेन्टहरूले भरिएका छन्। ती मध्ये दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो बेल्जियमको अवसर र Andreu Roig सडक.
Cala d'Or को Panoramic
Caló डी सा बार्का Trencada
यो सुन्दर कोव, जसको नामको अर्थ "टुक्रिएको डु boat्गाको" अर्थ हो स्पेनीमा, समुद्रमा प्रवाहित साना भागसहित पाइन रूखहरूले घेरिएको बालुवाको एक कुना हो। यसमा चट्टानी क्षेत्र पनि छ र अझै थोरै भ्रमण गरिएको छ। तसर्थ, यो समुद्री किनारमा तपाईंको परिवारको साथ एक दिन खर्च गर्नका लागि उत्तम छ, तपाईंको अद्भुत प्राकृतिक वातावरणको आनन्द लिदै।
यदि तपाईंलाई जिज्ञासा मनपर्‍यो भने, यो कोभको नजिक छ सलिनास को केप, जहाँ एक सुन्दर प्रकाशगृह छ र जुन मल्लोर्का टापुको दक्षिणी पोइन्ट हो। थप रूपमा, तपाईको शहर नजिकै छ पोर्टो पेट्रो, सानो माछा मार्ने गाउँले सम्भव भएसम्म यसको आदिम सार, सुरक्षित गरिएको छ।
यो मल्लोर्का टापुको पूर्वी भागमा अवस्थित छ। केवल ety ० मिटरको लम्बाई र क्रिस्टल सफा पानीको साथ, यो केहि सेवाहरू भएको तथ्यहरूको बाबजुद यो धेरै बारम्बार गरिएको छैन। उदाहरण को लागी, तपाईं एक कार पार्किंग धेरै आफ्नो कार छोड्न को लागी। समुद्र तटको छेउमा तपाईंसँग १ guard औं शताब्दीमा निर्मित गार्ड दुर्ग छ: ब्लाइन्ड टावरजुन हाल यसको सुन्दर बोटानिकल बगैचाको साथ मूर्तिकला संग्रहालय हो।
अघिल्लो र सब भन्दा महत्त्वपूर्णको अगाडी, काला रतजदा तपाईंलाई सबै उपकरणहरू प्रदान गर्दछ जुन यसको अभाव छ। दुबै नगरपालिकामा छन् क्याप्डेपेरा, सबैभन्दा धेरै माग गरिएको मध्ये एक हो जर्मन पर्यटन। तसर्थ, समुद्र तटको किनारमा, तपाईंले असंख्य बारहरू र रेस्टुरेन्टहरू भेट्टाउनुहुनेछ।
यदि तपाईंलाई सुनौलो बालुवा र नीलो पानीको सुन्दर सुगन्धको बारेमा थाहा पाउनुभयो भने हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं पनि यसमा जानुहोस् क्याप्डेपेरा टिप भूमध्यसागरको अद्भुत दृश्यहरूको आनन्द लिन। जब त्यो दिन स्पष्ट हुन्छ, त्यहाँका मूल निवासीहरूले भने कि तपाई मेनोर्काको पुरानो राजधानी सियुदाला देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै, तपाई माथि जान सक्नुहुन्छ क्याप्पेपेरा महल, एक पर्खाल को एक बाट संरक्षित जटिल; महल नै, जो सांस्कृतिक चासोको एक सम्पत्ति हो; चर्च, जसमा ख्रीष्टको गोथिक नक्काशी छ र क्यानामेल टावर, जुन मल्लोर्काको सम्पूर्ण टापुमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बचाव कार्यहरूमध्ये एक थियो।
पहिलेको पछाडिको प्रकृतिको यस समुद्री तट व्यावहारिक रूपमा छ कुमारी। वरिपरि पाइन वन र टिब्बा द्वारा घेरिएको Agullo को Coves y मोल्टो द्वारा गठन एक विशेष चासोको प्राकृतिक क्षेत्र १ 1991 XNUMX १ पछि। यसको सेता बालुवा र नीलो पानीले तपाईंलाई समुद्र तटमा रमाईलो दिनको मजा लिन दिन्छ।
थप रूपमा, यो कार द्वारा पहुँचयोग्य छ र पार्किंग पनि छ। यसबाट बालुवा सम्म मुश्किल दुई सय मिटर छन्। र, राम्रो नुहाइसके पछि, तपाईं वाचटावरमा जान सक्नुहुन्छ जुन यसलाई दायाँ पट्टि बन्द हुन्छ जहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ Son Jaume II टावर, कोर्सरको उपस्थिति बारे चेतावनी दिनको लागि तटमा हेर्नेहरू मध्ये एक। दृश्यलाई कल्पना गर्नुहोस् जुन यसले तपाईंलाई मल्लार्कन कोस्टको प्रस्ताव गर्न सक्छ।
यदि तपाईं क्रस गर्न हिम्मत त्रमुन्ताना पर्वत श्रृंखला यसको अनौंठो र गाह्रो सडकको लागि, पुरस्कारले तपाईंलाई अन्तमा प्रतिक्षा गर्छ कि प्रभावशाली पहाड दृश्यहरूको पूरक हो। यो क्याला डे सा Calobra हो, नगरपालिकाको सम्बन्धित एस्कोर्का.
यो चट्टानी समुद्री तट हो जसले पेरिस टोरेन्टको मुखको फाइदा लिन्छ र वरिपरि दुई सय मिटर अग्लो रमाईला चट्टानहरूले घेरिएको छ। एक अचम्मको आश्चर्य हो कि यसमा वनस्पति र जीव जन्तुको ठूलो सम्पत्ति पनि छ। वास्तवमा यो घोषणा गरियो प्राकृतिक स्मारक वर्ष 2002 मा।
तर, यदि तपाईं गुफामा जानुहुन्छ भने, तपाईंले अझै बढी विस्मयकारी आश्चर्य देख्नुहुनेछ: यसको पछाडि उल्लिखित साना कोव पछाडि छ। Torrente डे Pareis, जुन चंद्र परिदृश्य वा विज्ञान कथा उपन्यास बाहिर केहि जस्तो देखिन्छ।
कोल Baix, मल्लोर्का मा एक उत्तम coves
माथिको सुन्दर हुनुको साथ, हामी कोल बाइक्सलाई मल्लोर्कामा सबैभन्दा उत्तम कोभको रूपमा वर्गीकृत गर्ने हिम्मत गर्छौं किनकि यो लगभग कुमारी र जंगली बलौटे क्षेत्र हो जुन उच्च चट्टानहरूको बीचमा र पहाडहरूको बीचमा उठ्छ। यदि यो पर्याप्त छैन भने, यसको सेता बालुवा र क्रिस्टल स्पष्ट पिरोज़ा पानीले जटिललाई एक प्रभावशाली उपस्थिति प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ पुग्न, तपाईले लगभग minutes० मिनेटको पैदल यात्रा गर्नुपर्नेछ। यो बाट सात किलोमिटर अवस्थित छ अल्कुडिया, एक सुन्दर शहर जहाँ तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ परागकण को ​​रोमन थिएटर, १ शताब्दीको अन्तमा निर्मित।
मेजरकन टापुको उत्तरमा बालुवाको सट्टा चट्टानसहित अवस्थित अर्को सुन्दर कोभ र भव्य पहाडहरूले घेरेको छ। तपाईं पाइन वनको माध्यमबाट बीस मिनेट पैदल यात्रा पछि पुग्नुहुनेछ जुन सार्थक छ। साथै, यदि तपाईं शान्ति चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यो एक समुद्र तट हो मल्लोर्कामा कम से कम भ्रमण गरिएको.
लगभग तेह्र किलोमीटर टाढाको शहर हो परागकणसंकुचित र झुम्केको सडकहरूको साथ एउटा सुन्दर शहर जुन हामी तपाईंलाई यात्रा गर्न सल्लाह दिन्छौं। यसको सबैभन्दा प्रतिनिधि स्थान हो कलवरी चैपल, सब भन्दा माथिल्लो भागमा अवस्थित छ र जसको पहुँच 365 XNUMX पाइलाहरूको साथ एउटा सिँढी हो, यद्यपि तपाईं कारबाट पनि जान सक्नुहुनेछ। कुनै पनि केसमा, यसबाट हेराइहरू शानदार छन्।
हामी सान्ताñí क्षेत्रमा फर्क्यौं हामी तपाईंलाई मल्लोर्कामा अर्को उत्तम चेष्टाको बारेमा बताउन। यो सेन्स फन्ट डे एन'अलिस वा काला मोन्ड्रागन त्यो नामको प्राकृतिक पार्कमा भएकोमा। यसको केही टाढाको स्थानको बावजुद, यसले तपाईंलाई सबै सेवाहरू प्रदान गर्दछ र सबैभन्दा माथि, सपना जस्तो परिदृश्य राम्रो सेता बालुवा, जिज्ञासु टिब्बा र प्रशस्त पाइन रूखहरूले बनेको हुन्छ।
यो धेरै नजिक छ दुई अन्य सुन्दर लोभ छन्: कि S'Burgit र त्यो S'Amarador, जुन तपाईं समुद्रीतटको बाटो भएर पुग्न सक्नुहुनेछ। तर यदि हामी हिड्ने बारेमा कुरा गर्छौं भने, तपाईं आफ्नो भ्रमणको लाभ लिन सक्नुहुनेछ मोन्ड्राó प्राकृतिक पार्क पैदल यात्राको लागि। तिनीहरू एक र दश किलोमिटर बीचको सजिलो मार्गहरू हुन् तर सबै असाधारण परिदृश्यका साथ।
काला सन्त Vicenç
यो Pollensa नगरपालिका मा अवस्थित छ। बरु, हामीले बहुवचनमा बोल्नु पर्छ किनकी यस क्षेत्रमा तपाईले चारवटा सुन्दर लालच भेट्टाउनुहुनेछ: ती हुन् बार्कहरू, मोलेन्स, क्लारा y कार्ब। तिनीहरू मध्ये कुनैले तपाईंलाई भूमध्यसागरको र दृश्यको शानदार दृश्य दिन्छ काभल बर्नाट, एक रबड़ दांते प्रोमोन्टरी लगभग तीन सय मिटर अग्लो।
तिनीहरू सबै क्रिस्टल स्पष्ट पानीको साथ, तपाईंलाई अभ्यास गर्न विकल्प पनि दिन्छ स्कुबा डाइभि र पुरानो धँसा जहाजहरू हेर्नुहोस्। तर तपाईं Cala Sant Vicenç मा आफ्नो प्रवासको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ L'Alzineret को गुफाहरू, १1600०० ईसापूर्वदेखि डेटि,, अर्थात्, प्रेटलायोटिक अवधि। त्यहाँ सात कृत्रिम गुहाहरू छन् जुन त्यस समयको नेक्रोपोलिस हो।
मल्लोर्काको लोभको आनन्द लिनको लागि उत्तम समय के हो?
बेलारिक टापुको मौसम सामान्यतया हुन्छ भूमध्य, जाडोमा हल्का तापमानको साथ (विरलै पाँच डिग्री भन्दा कम) र गर्मीमा धेरै तातो, यद्यपि धेरै तातो छैन, औसत २ an-डिग्री सेन्टिग्रेडको साथ।
तसर्थ, तपाईं मल्लोर्कामा सबै भन्दा राम्रो कोव्सको आनन्द लिनको लागि उत्तम समय हो गर्मी। यद्यपि यो मौसम पनि यस टापुमा पर्यटकहरूको अत्यधिक आगमनको साथ छ। फलस्वरूप, हामी तपाईंलाई महिनाहरूमा यात्रा गर्न सल्लाह दिन्छौं मे, जून वा सेप्टेम्बर। मौसम लगभग रमाइलो छ र त्यहाँ अधिक शान्ति छ।
मल्लोर्कामा कसरी उत्तम कोभ्समा पुग्न सकिन्छ
यी समुद्री तटहरूको विशाल बहुमतमा पुग्न तपाईंलाई कारको आवश्यक पर्दछ र ती मध्येका केही पैदल पनि गर्नुपर्नेछ। यो प्राय सबै टापुहरूमा सामान्य कुरा हो। यस्तै केहि हुन्छ, उदाहरणका लागि मेनोर्का। जहाँसम्म, उदाहरणका लागि, काला मोन्ड्रागेमा पुग्नको लागि तपाईं यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ पर्यटक रेल त्यो बिहान आठ बजे देखि काला डी'ओरबाट छुट्छ।
कार भ्रमणका लागि, समुद्रीतट सडकहरूको साथ यात्रा गर्नु उत्तम हो यो भन्दा आधुनिक भित्री क्षेत्रहरूमा भन्दा। तर तटीय मार्ग गर्नाले तपाईंलाई यी चेपहरूमा अधिक प्रत्यक्ष पहुँच पुर्‍याउँछ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले तपाईंलाई हेर्ने अवसर दिनेछ। मल्लोर्कन तटको अद्भुत परिदृश्य.
प्रत्येक समुद्री तटको लागि निर्दिष्ट मार्ग बनाउन यसले लामो समय लिन सक्दछ। तर तट नजिकको सडकहरू हो मा- 414 पूर्वी क्षेत्रको लागि, मा- 12 उत्तर को लागी, मा- 10 पश्चिम र मा- 6014 दक्षिण को लागी।
अन्तमा, हामीले तपाईंलाई मल्लोर्कामा केहि उत्तम चित्रहरू देखाइदिएका छौं। तर धेरै पाइपलाइन मा रहेका छन्। बेकारमा हैन, बेलारिक टापुमा छ - हामीले तपाईंलाई भनियौं- करिब तीन सय। उदाहरणको रूपमा, हामी यस बारे पनि कुरा गर्नेछौं काला डेस मोरोसान्ताñíमा पनि र यो लगभग प्राकृतिक पोखरी हो कि; Cala Tuent, शानदार पुग मेजरको खुट्टामा; Caló des Marmols, जुन Cabo de Las Salinas बाट एक घण्टा पैदल यात्रा पछि पुगेको छ, वा काला फोर्नेल, Andratx नजिक र एक गहन पिरोजाइ निलो रंग को पानी संग। के तपाई तिनीहरूलाई जान्न चाहानु हुन्न?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » मल्लोर्कामा सर्वश्रेष्ठ छोडियो